Izindaba – The Ulwazi Programme
IsiZulu sinekusasa kwi-Internet
Sekukaningi ngizwa abantu bakithi bekhalaza ngokuntuleka kolwazi nolokho okuqukethe utho oluphusile ngezilimi zase-Afrika kwi-internet noma kwi-digital space. Abanye bakhala ngokuthi lokhu kudlala indima enkolelweni yokuthi izilimi zase-Afrika kazithwele ubuchule nobuhlakani. Abanye basaba nokuthi izilimi zakithi ziya ekushabalaleni. Ngike ngathatha ithuba ngaxoxa kabanzi ngaloludaba noSindi Mbili, ongumhleli we-News24 IsiZulu, okuyi-Website ebalelwa kwamanye ahamba phambili kuleli. Konke … Read more
Categories News Tags internet, Izindaba, news